यिनै हुने मेयरलाई एक स’टमा ढा’ल्ने युवा ! – Online Khabar 24
यिनै हुने मेयरलाई एक स’टमा ढा’ल्ने युवा !
प हिरो निरीक्षणका लागि बुटवल ३ ज्योति नगरमा गएका बुटवल उप महानगर पालिकाका नगरप्रमुख तथा एमाले रूपन्देही अध्यक्ष शिवराज सुवेदीलाई मु’क्का प्र’हार गर्ने एमाले कार्यकर्ता रहेको खुलेको छ।
ज्योतिनगरका स्थानीय गणेश पंगेनीले मेयर सुवेदीलाई आज बिहान मु’क्का हा’नेका थिए। उनी लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसमा अध्ययनरत अनेरास्ववियू जिल्ला कमिटी सदस्य हुन्।
विद्यार्थी राजनीति गर्दै आएका उनले प’हिरोले पी’डित बनाउँदा स्थानीय सरकारले प’हिरो व्यवस्थापनमा चासो नदिएकाले मु’क्का हा’नेको उनको भनाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले बताएको छ।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सरकारले वे’वास्ता गरेको भन्दै स्थानीय आ’क्रोशित बनेका छन् ।आज पनि उक्त स्थानमा प’हिरो गइरहेको र केही घरमा क्ष’तिसमेत पुगेको स्थानीयले बताएका छन् ।उक्त क्षेत्रमा पहिरोका कारण करिब दुई दर्जन घरपरिवार प्र’भावित भएका छन् । साभार गरियको खबर
Prevपारस शाहबाट प्रभावित हुँ, समर्थक हैन : भरतमणि [भिडियो]
nextराती श्रीमानसँग झ’गडा, बिहान पोखरीमा आमा छोराको श’व फेला !